Demokrasia : malalaka ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara saingy mila samy manaja ny fenitra ny tsirairay – Depeche TARATRA
Accueil/Politique/Demokrasia : malalaka ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara saingy mila samy manaja ny fenitra ny tsirairay
Demokrasia : malalaka ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara saingy mila samy manaja ny fenitra ny tsirairay
Elisé Romuald 15 septembre 2021
15 Septambra, andro iraisam-pirenena ho an’ny demokrasia. Misy ny demokrasia eto Madagasikara saingy mbola mila hamafisina ny fanajana ny fenitra, hoy ny filohan’ny Filankevitra Ambony Miaro ny Demokrasia sy ny Tany tan-dalàna (HCDDED), Navony Pierre Lenoble raha nanontanian’ny mpanao gazety teto amin’ny fanapariaham-baovao Taratra.
“Amin’izao fotoana izao, malalaka ny fanehoan-kevitra eto amintsika. Malalaka ny olona miteny, maneho hevitra. Hitantsika ireny amin’ny haino aman-jery sy facebook ireny. Any Inde, Chine, tsy misy an’izany Facebook izany, kanefa izy ireo milaza fa manaja ny demokrasia. Indraindray aza efa tafahoatra ny fanehoan-kevitra mahakasika ny mpitondrantsika sy ny tsirairay eto. Midika izany fa mbola tsy voafehintsika ny demokrasia. Tsy natao hanompana olona ny demokrasia fa misy fenitra tsy maintsy arahina. Anisan’izany ny fanajana ny hafa. Voafehintsika ve izany sa tsia?”
Fampianarana mandrakariva, hoy izy, ny fanoroana ny olona hiaina ny demokrasia. “Voalohany indrindra ho an’ny mpanao gazety izay mivoy izany demokrasia izany, ny mpanao politika izay miaina izany, ary ny mpitondra izay mampihatra izany demokrasia izany; samy tokony hanana sy hanaja ny etika avokoa izy ireo”.
Foibe CTAS Ambovombe Androy, hanodina ny mangahazo ho Gari.
Akon'ny fitsidihana sekoly nataon'ny MEN tany amin'ny faritra Atsimo andrefana: "Maro ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana".
Tafika: miatrika fiofanana aloha ireo lehiben’ny farim-piarovana
Bilan Sécurité publique: 9 gangsters tués et 135 arrêtés
Parlement : ouverture d’une nouvelle session extraordinaire ce jour
Prix de la vanille: les 2 ministères ont présenté leur excuse aux acteurs de la vanille.
Trafic de 73.5 kg d’or: Le procès de trois Malgaches reporté au mois de juillet
Participation de Madagascar au Cutlass Express 2021: une grande opportunité initiatique militaire
23e région: Les politiciens rassurent la population
Sécurité Publique: Bilan des cinq premiers mois de l’année